Nagu saabsan - Fuzhou Landtop Co., Ltd.
waa soo saare xirfadle ah oo alaab-qeybiye u ah Dynamo, Beddelaha, Generator, Diesel Generator, Electric Electric, iwm.
Sanado badan oo horumar ah, LANDTOPwaxay u soo saartay shirkad ballaadhan, casri ah, dhammaystiran oo caalami ah. Waaxdayada iibku waxay ku taal Fuzhou City (Fuzhou Landtop Co., Ltd. & FUJIAN TOPS POWER CO., LTD.) Magaalo-deked leh, oo ku raaxeysata shabakad gaadiid ku habboon. Waxaan sidoo kale leenahay warshad noo gaar ah magaalada Fu'an (Fu'an Landtop Power Co., Ltd.) Xarunteena caalamiga ah waxay ku taalaa Hongkong. Kooxdayadu waxay ku qalabaysan yihiin tiro aad u tiro badan oo xariiqyo isugeyn ah, nidaamyo tijaabo oo isku dhafan iyo qalabka wax lagu iibsado. Waxaan haynaa injineero xirfadlayaal ah, xubno xirfad leh oo QC ah, iibiyayaal khibrad leh iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka kadib. Qiimaha waxsoosaarka dhoofinta ee sanadlaha ah ayaa haatan ka badan 15 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Waxaan had iyo jeer dadaal weyn ugu jirnaa sidii aan ku gaari lahayn is-dhexgalka soo-saarka iyo iibinta. Waxaan awoodnaa inaan la kulanno macaamiisheenna dalabkooda, annagoo siinayna alaab tayo sare leh. Waxyaabaha our, ay ugu wacan tahay qiimo macquul ah, oolnimada sare iyo waxqabadka keydinta tamarta, waxaa si ballaaran u ammaanay by macaamiisha in ka badan 80 dal iyo gobollada, sida Europe, America, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Africa, iwm
Nidaamka R & D ee Xirfadlaha ah, tikniyoolajiyada caadiga ah, koox QC xirfad leh iyo kooxda maamulka ugu fiican ayaa ku siin kara dammaanad adag. Kooxdayadu waxay si joogto ah u sameynayaan dadaal adag oo ku saabsan hal-abuurnimada si ay si fiican ugu adeegaan macaamiisheenna. Waxaan hubineynaa in wadashaqeynteennu ay labadeenna u keeni doonto faa'iido-guul.